करिष्माको डेढ लाखको कपालको आयु कति ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
करिष्माको डेढ लाखको कपालको आयु कति ?
११ पुष,२०७३ | Forseenetwork
अभिनेत्री करिष्मा मानन्धर नेपाली सिने उद्योगकी सदाबहार सुन्दरी नायिकाका रुपमा चिनिएकी छिन् । यहि कारण पनि करिष्मालाई आफ्नो सुन्दरता कायम राख्नको लागि निकै नै मेहनत गर्नु पर्ने हुन्छ । उनी कुनै ईभेन्ट होस् या अवार्ड फंशन जहाँ पनि पुग्छिन् सुन्दरताको तारिफ बटुलेर फर्कन्छिन् । आफ्नो शरीरलाई फिट र सुन्दरतालाई ठीक राख्नको लागि उनी शारीरिक व्यायाममा पनि केही समय व्यतित गर्छिन् । जसको फलस्वरुप उनी शारीरिक रुपमा फिट र सुन्दरतामा ठीक पनि छिन् ।
यहि फिटनेस र सुन्दरताका साथ हालै दुवईमा सम्पन्न नेफ्टा अवार्डमा पुगेकी करिष्माले आफ्नो कपालबाट चर्चा बटलिन् । करिष्माको कर्ली कपालमा धेरैको ध्यान गयो । करिष्माको यो कपाल चानचुने कपाल भने होईन । यो निकै महंगो कपाल हो । सुन्दरतामा पैसा खर्च गर्न नडराउने उनले यो कर्ली कपालको लागि डेढ लाख खर्च गरेकी छिन् ।
खास कुरा के भने करिष्माको यो कपाल नक्कली हो । उनले आफ्नो कपालमा यो कर्ली कपाल जोडेकी हुन् । जोडेको यो कपालको आयु मात्रै एक बर्ष हुने पनि बताईएको छ ।
वास्तविक नाम लुकाउने २२ कलाकार
सिने क्षेत्रका चर्चित केहि सेलिब्रेटीहरुको वास्तविक नाम हामीमध्ये केहिलाई मात्र थाहा होला तर धेरैलाई थाहा छैन । केहि सेलब्रेटीहरुले सिन..
अन्तरजातीय विवाह गर्ने नेपाली सेलिब्रेटी, कोही सफल कोही असफल
राजनीतिमा लागेका यी कलाकार को कति सफल ?
प्रेममा एक कदम अगाडि करिष्मा, उनैले राखेकी थिईन् विहेको प्रस्ताव
डी सिने अवार्डका आकर्षण बनेका तीन अभिनेत्री